EX - ABSDF: April 2014
မလေးရှားမနက်ခင်း က ဒီနေ့မှာတော့
သာသာယာယာ ရှိနေပါသည် ။ မသာယာသည်က ကျွန်မမြင်နေရသော မြင်ကွင်း ။ ကျွန်မရောက်နေသည်က ဘဏတစ်ခုမှာပါ
။ ဒီနေ့ ကြားရက်ဖြစ်နေတာမို့ ဘဏ်မှာ လူရှင်းနေသည် ထင်ပါရဲ့ ။ ကျွန်မဘဏ်ထဲသို့ဝင်လိုက်စဉ် လူတစ်ယောက် ဘဏ်ထဲကနေ
ခပ်တွက်တွက်လေးထွက်သွားပါသည် ။ သူကိုကြည့်ရတာ ပျာယီးပျာယာပုံစံမို့ စိတ်ဝင်စားသွားမိသည်
။ ပိုက်ဆံထုတ်ချိန် password မှားနေသည်မို့ ငွေကထုတ်လို့မရပြန်ဘူး ။
၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၉) ရက်နေ့ဗမာ့တပ်မတော် တပ်မှူးများ
ညီလာခံတွင် နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်၏မိန့် ခွန်းသည် အရေးကြီး၍ အချက်အခြာ ကျလှပေသည်။ ကျွန်တော်တို့ အဖို့ မှာ တပ်မတော်ကြီးအတွက် တပါတီ တပုဂ္ဂိုလ် သံယောဇဉ်ကင်းသော မျိုးချစ်ပြည်သူ့ တပ်မတော်ကြီးအဖြစ် ထာဝစဉ် လိုလားခဲ့ရာ ၀န်ကြီးချုပ်၏ မိန့် ခွန်းသည် မျိုးချစ်တပ်မတော်အဖြစ် လိုလားကြသောပုဂ္ဂိုလ်တိုင်း ဆန္ဒနှလုံးကို တိုက်ရိုက် နှိုးဆော်ပေးရာ ကျပေမည်။
လင်း သက် sharedastatus. ဒီနေ့ ပြောချင်တာမှ လျှာကို ယားနေတဲ့ အကြောင်းအရာလေး တစ်ခုပြောပြမယ်...။ ဥပဒေကိစ္စပါ...။ လူတော်တော်များများက ပြောလေ့ရှိကြတယ်...(အဲ့ဒီလူတွေထဲမှာ ပညာရှင်ဆိုသူများ လည်း ပါကြပါတယ်။)မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ ခြေလှမ်းတွေထဲမှာ ဥပဒေပြုရေး ကိစ္စတွေက ထိပ်ဆုံးက ပါတယ်လို့...။ အဲ့ဒီအဆိုကို ကျွန်တော်မငြင်းပါဘူး...။ ဒါပေမယ့် တော်တော်များများ သတိမထားမိတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုရှိနေပါသေးတယ်...။
၂၀၁၂ ) ခုနှစ်၊ နှစ်ဦးပိုင်းလောက်က အလုပ်ကိစ္စ တစ်ခု နဲ. စင်္ကာပူ ကို သွားဖြစ်ခဲ့တယ်။ရေနံ ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုက ၀န်ထမ်း နှစ်ယောက် နဲ.အတူတူ သွားရတာပါ ။ အမျိုးသားတစ်ယောက် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်၊ ကိုယ်နဲ. မတိမ်းမယိမ်း သက်လတ်ပိုင်းတွေပါပဲ…။
စင်္ကာပူရောက်တော့ အလုပ်ကိစ္စသွားကြလာကြရင်း စင်္ကာပူ ရဲ. လူနေမှုအဆင့်အတန်း ၊ အုပ်ချုပ်ပုံ၊ မြို.ပြတည်ဆောက်ပုံတွေ ကိုလဲ အကဲခတ်လေ့လာမိတာပေါ့
။အဲလို လေ့လာမိတော့ ထုံးစံအတိုင်း ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်အစိုးရ ရဲ. တလွဲတချော် တွေ ကို ဝေဖန်ကြရော…၊အဓိက ဝေဖန်တာက ကျွန်တော် နဲ. ရေနံကုမ္ပဏီက အမျိုးသား ၀န်ထမ်း နဲ.ပေါ့ဗျာ…။
အဲဒီလို ကျွန်တော်တို. နှစ်ယောက် ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြတာကို အတူပါတဲ့အမျိုးသမီးက စိတ်ဝင်တစား နားထောင်နေရင်း မေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်…….
မေးမြန်းနှုတ်ဆက်သူကို ကျနော်ကြည့်သည်။ ကောင်းဘွိုင်ဦးထုပ်၊ ပြောက်ကျားစစ်အင်္ကျီ၊ စစ်ဘောင်းဘီ၊ ရာဘာညှပ်ဖိနပ်။ အသားဖြူဖြူ၊ ပါးရိုးနားရိုး ကျကျ၊ ခန္ဓာကိုယ် ခပ်ပါးပါး။ “ဟုတ်ပါတယ်၊ ခင်ဗျားက ကိုတိုက်မောင်းလား” Read more »
ပူ၏။ အပူလှိုင်းကြောင့် … တန်ခူးနွေသည် ပို၍ပူပြင်းလွန်းနေသည်။ နေပူပြင်းပြင်းအောက်တွင်ပင်၊ သူ … ကျနော့်အိမ်သို့ ရောက်လာ၏။ ကျနော်က အိမ်တွင် မရှိ …။ သူ စတင်တည်ထောင်ထားခဲ့သည့် စာကြည့်တိုက်လေးတွင် ရောက်နေသည်။ အိမ်နှင့်စာကြည့်တိုက်က မဝေး …။ သူ … စာကြည့်တိုက်သို့ လိုက်လာ၏။
၁။ ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်။ မနက်ကိုးနာရီလောက် ဖုန်းမြည်လာလို့ ကောက်ကိုင်လိုက်တယ်။ တဖက်က ဆက်လာသူက ကဗျာဆရာ ကိုလွမ်းဏီ။
“ဟေ့လူ ... ကိုငြိမ်း ဆုံးသွားပြီ။ ဒီမနက် သုံးနာရီလောက်မှာ ဆုံးသွားတာလို့ ပြောတယ်”
ရွှေဆိုင်နှစ်ဆိုင်ကို အကြမ်းဖက်ဓားပြတိုက် ရန် ပြည်တွင်း လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က လက်နက် ငှားရမ်းပေးခဲ့ဟု ဖမ်းဆီးခံရသူ များထွက်ဆို
ဒိုက်ဦးမြို့တွင် ရိုးရှင်းစွာ ကျင်းပနေသော ၁၉ နှစ်ပြည့် ရဲဘော်တိုက်မောင်း ကျဆုံးခြင်း အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားသို့ ပေးပုိံ့လိုက်သော သ၀ဏ်လွှာ
ဒိုက်ဦးမြို့တွင် ရိုးရှင်းစွာပဲ ကျင်းပနေသော ၁၉ နှစ်ပြည့် ရဲဘော်တိုက်မောင်း ကျဆုံးခြင်း အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတွင် ဝေငှနေသော Flyer .
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံဆည် တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်း အပြီးအပိုင် ရပ်ဆိုင်းရေးအတွက် ရန်ကုန်ကနေ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ဆုံကို ခရီးရှည် လမ်းလျှောက် ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေတဲ့
ကိုသီဟ ဦးဆောင်တဲ့ ၄၅ ယောက်အဖွဲ့ က စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြစွာနဲ့လိုက်ပါချီတက်နေတဲ့ အသက်အကြီးဆုံး ၇၇ နှစ်အရွယ် ကို ဒီကနေ့ တွေ့ ခဲ့ရပါတယ်။
သင်္ကြန်ကာလအတွင်း အခြားအလုပ်မရှိသည်နှင့် စာရေးစာဖတ် အလုပ်လုပ်ပြီးလျှင် Sky Net ရုပ်မြင်သံကြားမှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သော သင်္ကြန်ဖျော်ဖြေရေးမဏ္ဍပ်များ အစီအစဉ်ကိုကြည့်ဖြစ်ပါသည်။ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့် မှုမှာ ရုပ်သံလိုင်းသုံးလိုင်းမှ ထုတ်လွှင့်နေခြင်းဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်၊ နေပြည်တော်၊ မန္တလေးမြို့များရှိ Sky Net ရေကစားမဏ္ဍပ်များတွင် ဖျော်ဖြေတီးမှုတ်သီဆိုနေကြသည်များကို တိုက်ရိုက်ရှုမြင်ရပါသည်။ Read more »
ဆရာကြီးဦးဝင်းတင်၏ နောက်ဆုံးခရီးသို့ဂါရ၀ပြုခြင်း
ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်ကိုခန်းခန်းနားနား လူထုဈာပန ဖြစ်စေချင်တာ ကျနော်ဆန္ဒပါ။ တတ်နိင် ရင်သူ့ခန္ဓာကိုယုတသန်ခန်းမမှာ လူထုဈာပန အဖြစ် ကျင်းပချင်ပါတယ်။ ယုဒဿန်ခန်းမက သိက္ခာတော်ရဆရာတော်ကလဲခွင့်ပြုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ကျနော်ဆန္ဒမပြည့်ဝခဲ့ဘူးပေါ့နော်။
မျက်မမြင်ပုဏ္ဏား ခြောက်ဦး ပုံပြင်နှင့် ဆင်တူယိုးမှား ပုံပြင်များသည် သမိုင်းအစဉ်အလာကြီးမားသော ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအတော်များများတွင် ရေပန်းစားရုံမျှမက စံပြုပုံပြင်များ အဖြစ်တည်ရှိကြပါသည်။
ထိုပုံပြင်ထဲတွင် ပြဆိုထားသော ဇာတ်ဆောင်များသည် မျက်မမြင်များဖြစ်ကြပြီး၊ ဇာတ်လမ်း၏ အသက်သည် အမြင် တစ်နည်းအားဖြင့် အယူအဆဖြစ်ပါသည်။
…………………… တခြမ်းပဲ့လမင်းကို ငေးရင်း…. ဘီယာဆိုင်က မသဲမကွဲသီချင်းသံကို နားစွင့် အိပ်မက်မက်နေတဲ့ ကင်းသမားထံ… ဆေးလိပ်တို တောင်းသောက်ခဲ့ရသော..တရားခံ…
Breakfast မပါတဲ့ နံနက်ခင်းကို
အစိုးရ စေတနာ ပင်စင်စားတွေ ဖုန်းကဒ်တွေ ချပေးတယ် ပြောတာပဲ ...
========= ကိုကျေးညိုက သူ့ကောင်မလေး မိစိန်ဆီ ဖုန်းဆက်တယ်... ... "ဟလို... စိန်" "ဟားလို ကိုကိုညို" "ဒီတစ်ပတ် တနင်္ဂနွေ ကိုယ်တို့ ၂ယောက်တော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေ့ရပြီကွ" "ဘာလို့လဲ ကိုကိုညို"
သတင်းစာဆရာကြီး ဟံသာဝတီဦးဝင်တင် ဈာပန (ရုပ်/သံ)
လယ်သမား တစ်သိန်းကျော် ပါဝင်မည့် ဧရာဝတီ လယ်သမား ညီလာခံ ပြုလုပ်မည်
လေယာဉ်ရှာဖွေရေး လုပ်ငန်း သုံးပုံနှစ်ပုံ ပြီးမြောက် ပျောက်ဆုံး လေယာဉ်၏ မည်သည့် သဲလွန်စမျှ မတွေ့ရ
ဦးဝင်းတင် (သို့မဟုတ်) ပြည်သူတို့ရဲ့ စကားပြန်
ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဈာပနအခမ်းအနားအား ထောင်အတွင်းမှ သံချေခြင်း ခက်ပုံစံဖြင့် တက်ရောက်ဂါရ၀ပြု
ကိုမိုးသီးဇွန် ခေါင်းဆောင်ကာ ဦးဝင်းတင် နောက်ဆုံးခရီး လမ်းလျှောက်ပို့ဆောင်
ဒလတွင် သောက်သုံးရေ အခက်ခဲနှင့် ကြုံတွေ့နေ
မလေးရှားလေကြောင်းလိုင်း လေယာဉ်တစ်စင်း အရေးပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့ရ
ရွှေညောင်မှာ လောင်စာဆီ သိုလှောင် အိမ် မီးလောင်
ပြည်သူကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသော ရဲတပ်ဖွဲ့ ဖြစ်ရန် ရဲချုပ်ပြော
ပုသိမ်မြို့မှာ မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွား
မီးဖိုမီးမွှေးရာမှ နေအိမ် ၁၁ လုံး မီးကူးစက် လောင်ကျွမ်း
နတ္တလင်းအကြမ်းဖက်မှုများတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် အရန်မီးသတ်များပါနေဟု တိုင်ကြားသဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးနေ
သူရဲကောင်း ကို နှုတ်ဆက်ခြင်း
“သိမ်းကွာ . . အကုန်သိမ်း၊ လမ်းထဲကခုံတွေပါ ဝင်ဆွဲကြကွာ . . .”
“ ၀ူးးးးးးး ”ခနဲ ထိုးရပ်လာသည့် ကားပြာကြီး၏ ခေါင်းခန်းမှ ဆင်းလာသည့် လူဝကြီး၏
နှုတ်ဖျားမှ လျှံကျလာသည့် စကားသံအချို့ ဖြစ်၏။
နံနက်စောစော ၃၉လမ်းထိပ်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးတွင် ကျွန်တော်နှင့် ရုံးကတစ်ယောက်
စကားစမြည်လေးပြောရင်း စားသောက်နေချိန် လက်ဖက်ရည်တစ်ဝက် မကုန်သေးခင် ဆိုင်ရှင်က
“ လာပြီ . . လာပြီ . . သိမ်းကြ . . သိမ်းကြ”ဟု ရုတ်တရက် ထိတ်ထိတ်ပျာပျာ အော်ဟစ်ရင်း
လက်ကလည်း ကျွန်တော်တို့ လက်ဖက်ရည်စားပွဲကို ဆွဲယူမတင်ပြီး ပလက်ဖောင်းပေါ်ကနေ
အမှောင်ခေတ်ကြီးတစ်ခုလုံးကို စိမ်ခေါ်ခဲ့သူ ကွယ်လွန်ခြင်း ဂုဏ်ပြုကဗျာ
ငါတို့ခေတ်ရဲ့ မာန်မာနကိုပြတဲ့ မဟာသင်္ကေတပါပဲ။
ကျနော်တို့ အာရုံနဲ့ ခံစားလို့ရတဲ့ လောကကြီးထဲက သဘာဝဖြစ်စဉ်တွေကို သဘာဝကျတဲ့ ဖြေရှင်းမှုမျိုး ပေးဖို့ဆိုတဲ့ လူသားရဲ့ ကြိုးပမ်းချက်ပါ။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ သူတို့ ကဏ္ဍအလိုက် သဘာဝဖြစ်စဉ် အမျိုးမျိုးကို ရှုစားလေ့လာကြတယ်။ ဒီ့နောက်မှာတော့ ဒီဖြစ်စဉ်တွေကို ရှင်းပြဖို့ စနစ်ကျတဲ့နည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုပါတယ်။
ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်ရုပ်အလောင်းကို ရေဝေးသုသန်သို့ သယ်ဆောင်
ဆရာ ဦးဝင်းတင် ကွယ်လွန်ပြီ
Posted: 21 Apr 2014 12:23 AM PDT
၊ တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် နမ့်ခမ်းမြို့တွင် တရုတ်ပြည်သားပိုင် သတ္တုကျောက် တင်
ကားများမှ တန်ပိုတင် စည်းကမ်းမဲ့ မောင်းနှင်မှုကြောင့် ဒေသတွင်းလမ်းမကြီးနှင့်လမ်း သွယ်များပျက်စီးနေ သည်ဟု ဒေသခံများကပြောသည်။တရုတ်နိုင်ငံသား များသာမောင်းနှင်သော တရုတ်လိုင်စင်ရှိ အဆိုပါ ကားကြီးများသည် နမ့်ခမ်းမြို့ နယ် အတွင်း ထွက်သော သတ္တုကျောက်များကို တန်ချိန်ပို တင်ဆောင်ကာ နေ့ညမပြတ် တရုတ်နိုင်ငံသို့ Read more »
သေမှ ချီးမွမ်းရတယ် ကွ ဟု စာရေးသူ၏ ဖခင်က သင်ကြားဆုံးမခဲ့ဘူးပါသည်။ မသေခင်
ချီးမွမ်းမိလျှင် အကယ်၍ ထိုသူသည် ငွေကြေး၊ အာဏာ၊ အရှိန်အ၀ါ၊ စာရိတ္တ နှင့် ရပ်တည်ချက်များ ၌ ဖေါက်ပြန် ပျက်စီး သွားမည်ဆို ပါက ချီးမွမ်းထားမှုမှာ အချည်းနှီး ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ပင်။ သို့ ရာတွင် မသေခင်မှာပင် စာရေးသူတန်ဘိုးထား ချီးမွမ်း လိုသော၊ ဂုဏ်ပြုလိုသော၊ ထိုသို့ ချီးမွမ်း ဂုဏ်ပြု ကြောင်းလဲ ကြားသိစေလိုသောပုဂ္ဂိုလ်အချို့အနက် ဆရာကြီး ဦးဝင်း တင်သည် ထိပ်ဆုံးမှပါရှိပါသည်။
သတင်းစာဆရာကြီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဟာ ဒီကနေ့ တနင်္လာနေ့ နံနက် ၆ နာရီခွဲ အချိန် ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီးမှာ ကွယ်လွန်အနိစ္စ ရောက်သွားပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ အထူးစိုးရိမ်ရတဲ့အတွက် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး အရေးပေါ် အထူးကြပ်မတ် ကုသဆောင်မှာ ကုသမှုခံယူနေရင်း ကွယ်လွန်သွားတာပါ။
စိတ်သာချ ဘာမှဖြစ်မလားဘူး၊ ဒေါ်စုက တပ်မတော်ကို ဗိုလ်ချုပ်ခြေရာ လိုက်ဖို့စည်းရုံးတာလည်း အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်၊ အချည်းအနှီးပဲ၊ ဘာမှဖြစ်မလာဘူး၊ ခြေရာလိုက်တော့လိုက်ပါတယ်၊
ဂျာမနီ နိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း မိမိတို့ နိုင်ငံ၏ အမည်အား အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဖြင့်
Burma ဟူ၍သာ သူမက ဘာကြောင့်ခေါ်ဝေါ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြချက်အရသူမကိုယ်တိုင်တစုံတရာ စတင် ပြောင်း လဲလာပြီလားဟု မြှော်မှန်းသူများရှိ
လာသည်။ သေချာသည်မှာ နိုင်ငံအမည်
Burma သုံးစွဲခြင်းအား မဟာမြန်မာလူမျိုး ကြီး ၀ါဒကို ကျင့်သုံးလျှက်ရှိသော
စစ်ခေါင်းဆောင် ဟောင်း သစ်များက မကြိုက်။ မကြိုက်မှန်းလဲ သူမကိုယ်တိုင် ကောင်းစွာ သိသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၁) ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က စာထုတ်ကာ နိုင်ငံအမည် အား Myanmar ဟူ၍သာသုံးရန် သူမကိုသတိပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်သောကြောင့်ပင်။ ဤသည်ကိုသိသိကြီး နှင့် သူမသည် အဘယ်ကြောင့် ယခုမှ Burma ကို ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်နေသနည်း၊ ယင်းသို့ ဖေါ်ထုတ်မှုသည်
ငြိမ်းချမ်းရေးပြသနာ နှင့် မည်သို့ ဆက်စပ်သနည်း၊ Read more »
ရခိုင်မှာဖွင့်မည့် INGO ရုံးလုံခြုံရေး နယ်မြေကန့်သတ် တာဝန်ယူဖို့ ပြင်ဆင် စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေ နှုတ်ယူခံရမှု သာပေါင်းလယ်သမားတွေ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြ
ကိုရီးယား သင်္ဘောမှောက်မှုကြောင့် ဒုကျောင်းအုပ် အဆုံးစီရင် ဧပြီလ(၁၉)ရက်နေ့ ထုတ် ကြေးမုံ နေ့ စဉ် သတင်းစာ
ကချင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေ ဝမ်းလျှောရောဂါဖြစ် ကိုရီယား သင်္ဘောနစ်မြုပ်မှု ၊ ခရီးသည်များ ဘေးမကင်းမီ သင်္ဘောကို စွန့်ခွာခဲ့သော ကပ္ပတိန်မှာ တာဝန်ရှိသလား...
Si Thu's photo.
ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲ သွားမှု နှင့်အတူ တစ်ချိန်က အနောက် အုပ်စုက ဖိန့်ဖိန့် တုန်အောင် ကြောက်လန့် ခဲ့ရသော ဆိုဗီယက် တပ်မတော်
ကြီးလည်း ပျောက်ကွယ် သွားခဲ့ ရသည်။ ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု ထံမှ အမွေ ဆက်ခံ ခဲ့သော ရုရှား တပ်မတော်ကား ဟန်သာ ရှိပြီး အဆန် မရှိသည့် သင်္ကြန် အမြောက်သာ ဖြစ်နေ ခဲ့သည်။ Read more »
ABSDF ( မြောက်ပိုင်း ဗဟိုမှ ) ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတစ်ဦး ကြိုးဆွဲချ သေဆုံး
ABSDF ( မြောက်ပိုင်း ) မှ ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုနေဒွန်း ( ခေါ် ) ကိုအောင်ထွန်းသည် ပြီးခဲ့သည့် မတ်လအကုန်တွင် သူနေထိုင်ရာ အမေရိကန်နိုင်ငံ ၊ နယူးယောက်ပြည်နယ်၊ ဘတ်ဖဲ လိုးမြို့တွင် သူ့ကိုယ်သူ ကြိုးဆွဲချပြီး သေဆုံးသွားကြောင်း Classic Burma News မှ သတင်းရရှိပါသည်။
DVB မကွေးသတင်းထောက် ကိုဇော်ဖေ အတွက် ဆုတောင်း ရာဇ၀င်တွင်တဲ့ မကွေး
မနေ့တစ်နေ့က ဖတ်လိုက်ရတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်မှာ“မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသက် (၁၅) နှစ်နှင့် အသက် (၂၀) အကြား လူငယ်ဦးရေ (၁၀) သန်းကျော် ရှိနိုင်ပါကြောင်း ခန့်မှန်းထားပါသည်” ဆိုတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ နည်းနည်းနောနောအင်အားမဟုတ်ဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံ လှလှပပ တိုးတက်လာဖို့ မျှော်လင့်စရာ အင်အားတွေပဲလို့ ခံစားမိပါတယ်။ ကဲ… လှလှပပ ကိုယ့်အမိနိုင်ငံ တိုးတက်ဖို့ ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်ချေတွေများ ရှိသလဲ့ ။ တတ်နိုင်သမျှ အတွေးဆန့်မိတယ်။ လူငယ်တွေဆိုတော့ (၁) ပညာတတ်ဖို့ ကျောင်းမှန်မှန်တက်ကြမယ် ဒါမှမဟုတ် ပြင်ပမှာ သင်ယူနိုင်စရာ အတတ်ပညာတွေ သင်ယူကြမယ်။ (၂) လုပ်ငန်းအသီးသီးမှာ စတင်ပြီးအလုပ်သင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဝန်ထမ်းငယ် အနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် စလုပ်မယ်။ (၃) ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း တစ်ခုကို သေးသေးလေး ပဲ ဖြစ်ဖြစ် စလုပ်ကြည့်မယ် ဆိုပြီး တွေးမိပါတယ်။
ဂူဂယ်လ်မျက်မှန်ဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ လုံခြုံရေးနဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စတွေအပေါ် စိုးရိမ်ရ
ယူကရိန်း လွတ်လပ်ရေး ရုရှား ဖျက်ဆီးနေဟု ဆို
ယူကရိန်း အရှေ့ပိုင်း နေတိုး တပ်ဖွဲ့ တိုးချမယ်
မြ၀တီမြို့က သင်္ကြန်တွင်း ရမ်းကားမှု ယာဉ်နှစ်စီး လမ်းဆုံ၌တိုက်မိခဲ့၍ တစ်စီးတိမ်းမှောက်ကာ(၁)ဦးသေ၊ (၁၆)ဦးဒဏ်ရာရ
ပျောက်ဆုံး မလေးလေယာဉ် ရှာဖွေရန် အမေရိ ကန် ရေတပ် သုံး ရေအောက် မောင်းသူမဲ့ယာဉ် အသုံးပြုမည်
အရှေ့ပိုင်း လေတပ်စခန်း ယူကရိန်းတပ်တွေက ပြန်ထိန်းချုပ်
မန်စီမြို့နယ်မျာ အစိုးရတပ်နဲ့ ကေအိုင်အို တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်
မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့လက်နက်ကိုင်လူမျိုးစုများ ကလေးစစ်သားပပျောက်ရေးကို အမေရိကန်နဲ့ကမ္ဘာ့ လူ့အခွင့်ရေးအသင်းကြီးများ တွန်းအားပေးမှုကြောင့် စစ်သားစုဆောင်းမှုတွေရပ်တံ့သွားကြတာ အင်မတန်ကောင်းတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်လို့
အထူးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဆက်ပြီး လုပ်ရမဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ရပ်များစွာ ရှိနေပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ တာဝန်ယူမှု ရှိတဲ့ စီးပွားရေး
အရှေ့ပိုင်းမှာ စစ်ဆင်ရေးတစ်ခု ယူကရိန်း စတင်
အကျဉ်းဦးစီးဌာန၏ ဒုတိယအကြီးအကဲ ဒေသစာရီခရီးစဉ်ရဲ့ (ကုသိုလ်/အကုသိုလ်) အတူရေကစားစဉ် ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှ အခြားမိန်ကလေးအား ရေလောင်း သည်ကို စိတ်ဆိုးပြီး ပိုးသတ်ဆေး သောက်၍သေဆုံး
ခမရ(၅၆၅)မှ ဗိုလ်ကြီးတစ်ဦး ရခိုင်လူငယ်တစ်ဦးကို ရိုက်နှက်
ပဲခူးမြို့နယ်၊ ကင်းပိုင်ကျုံကျေးရွာတွင် လူသတ်မှုဖြစ်ပွား
ပဲခူးမြို့၊ နန်းတော်ရာရပ်ကွက်တွင် မုဒိမ်းမှုဖြစ်ပွား
သင်္ကြန်အတွင်း အရက်မရောင်းချရန် တားမြစ်ထားသော်လည်း ဘီယာများနှင့် အရက်များ ရောင်းချ
ယနေ့ ရန်ကုန် သင်္ကြန်တွင် ယာဉ်တိုက်မှုများ မန်းရွှေမြို့တော် ယာဉ်မောင်းအိပ်ငိုက်၍ လမ်းလယ်ကျွန်း ကပ်တုံးများအား တိုက်မိ
ယူကရိန်းအစိုးရ အရှေ့ပိုင်းဒေသမှာ ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကြေညာ KIA ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော် အမေရိကန် ရောက်ရှိ
မင်္ဂလာဒုံ လေယာဉ်ကွင်းမှာ လေယာဉ်နှစ်စင်း တိုက်မှုဖြစ်ပွား (ဓါတ်ပုံ) ၂၀၁၄ သင်္ကြန် အကြိုနေ့ မြင်ကွင်း (ရုပ်/သံ) မောင်မောင်ဆိုလေ ထီးရိုးရှည် အပိုင်း(၄) (ရုပ်/သံ)
ယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းရှိ ရုရှလိုလားတဲ့ လက်နက်ကိုင် ဆန္ဒပြသူတွေ လက်နက်တိုက် သိမ်းပိုက်
ဆိုင်ကယ် ၂ စီး မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်မိ၍ ၂ ဦးသေ၊ ၂ ဦးဒဏ်ရာရ
စကားများရာက ဇနီးအား ဖျာပေါ်တွင် မီးရှို့သဖြင့် သေဆုံး
ခရီးသည်တင်ယာဉ်မှ အရှိန်လွန်ကာ လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်အား တိုက်မိခဲ့၍ ခရီးသည် (၁၅)ဦး ဒဏ်ရာရ
ရေကစားမဏ္ဍပ်များ စည်းကမ်းဖောက်လျှင် ပိတ်သိမ်းမည်အထိ အရေးယူမည်
ဂျာမနီရောက် မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့မယ်
ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း သင်္ဘောအတက်အဆင်း အန္တရာယ်ရှိ
၂၀၁၄ ခုနှစ် ဧပြီလ
၅ မှ ၈ ရက်နေ့ အထိ ရန်ကုန်တွင် အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တိုင်းရင်းသား
တော်လှန် ရေး အဖွဲ့ အစည်းများအကြား အပစ်ရပ်ရေးဆွေးနွေးပွဲသည် မူပိုင်းဆိုင်ရာအရ သဘောတူညီချက် အတိအကျ မရဘဲ ရွှေ့ ဆိုင်းလိုက်ရသည်။ ယင်းဆွေးနွေးပွဲမှာ ဘာတေးလ်လစ်တနာပြောသလို နွားရှေ့ ထွန်ကျူး ဖြစ်နေသည်။ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများအရင်ကျင်းပကာ သဘောတူညီချက်ရအောင်ယူရမည့်အစား အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သက်သက်ကိုသာ အရင် ဦးစွာလက်မှတ်ထိုးရပြန်ဦးတော့မည်လား၊
၁၉၈၉ မေလက စတင်လုပ်ခဲ့သလိုမျိုးထပ်လုပ် ရပြီး နောက်ထပ် နှစ်ပေါင်း ၂၅ နှစ်ကြာ ဆိုးသွမ်းသံသရာ ပြန်လည်ဦးတော့ မည်လား စိုးရိမ်ဘွယ် ရှိလာသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးပြသနာများကို ထဲထဲ ၀င်ဝင်လေ့လာပြီး၊ အင်တိုက် အားတိုက် ပါဝင်လှုပ်ရှားမှသာ စစ်မှန်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးရနိုင်ဘွယ်ရှိပါသည်။ ယခုမူဤသို့ ဖြစ်မနေသေးပါ။ အကြောင်း နှစ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပထမ တကြောင်းမှာ ခေါင်းဆောင် အဆင့်ဆွေးနွေးပွဲများကိုသာ အဓိကထားနေခြင်းကြောင့် ပင်။ နှစ်ဘက်အင်အားစုများ ၏ အောက်ခြေ တပ်ထုများ၊ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားလူထုများနှင့် လူထုအဖွဲ့ အစည်းများ အတွင်းချပြ ဆွေးနွေးခြင်း၊ သဘောထားအမြင်တောင်းခံခြင်းတို့ မှာ လွန်စွာပင်နည်းလွန်းနေသည်။
သေဆုံးသူဦးရေ အတည်မပြုနိုင်သေးသည့် အမြန်လမ်းယာဉ်တိုက်မှု ဓါတ်ပုံများ (သွေးလန့် တက်သူများ မကြည့်ရ) Updated: အမြန်လမ်း ၁၁၆မိုင် ယာဉ်မီးလောင်မှုမှာ ခလေးတစ်ဦး အပါအ၀င် လူ (၁၂)ဦး သေဆုံး (ရုပ်/သံ)